मन्जुलाई ट्रकमा लगेर पटक–पटक ब’ला’त्कार, यसरी खुल्यो चितवन का’ण्ड रहस्य – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/मन्जुलाई ट्रकमा लगेर पटक–पटक ब’ला’त्कार, यसरी खुल्यो चितवन का’ण्ड रहस्य
काठमाडौं । बाराको सिमरा बस्ने मञ्जु अधिकारीको ह त्या चितवनमा भयो । मञ्जु दोस्रो विवाह गरेर चितवन पुगेकी थिइन् । उनको विवाह कृष्ण अधिकारीसंग भएको थियो । विवाह भएको २२ वर्ष सम्म पनि बच्चा नभएपछि कृष्णले मञ्जुलाई विवाह गरेका थिए । उनले मञ्जुलाई ज वर ज स्ती विवाह गरेका थिए । विवाह गर्नु अघि कृष्णले मञ्जुलाई पटक पटक ब ला त्क र गरेका थिए ।
मञ्जु वारामा पहिलो श्रीमानको घरमा हुँदा सासु र उनको परिवारले निकै माय गर्थे । त्यही बेलामा कृष्णले मञ्जुलाई ललाइ फकाई लिएर गएका थिए । विवाह गरेर लगेपछि र बच्चा जन्मिएपछि भने कृष्णले मञ्जुलाई अ त्या चा र गर्न थालेका थिए । त्यसपछि मञ्जुले आफ्नो आमालाई म ख त रामा छु भन्दै एक महिना अघि फोन गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो सबैभन्दा सञ्जन र सिधा छोरी भन्दै भ क्का निएर रो ए की छन् ।
उनले छोरीको बारेमा यस्तो खबर पाएपछि आफु वे हो स भएको बताइन् । मञ्जुको सौताकै अगाडी ह त्या भएको भन्दै आमाले रुँ दै भनिन्, ‘न मा र न मा र भन्दाभन्दै ज्यान लिएछ ।’ माइतीमा पनि सबैलाई माया गर्ने मञ्जु परिबन्धमा परेर दोस्रो विवाह गरेको आमाको भनाई छ उनीहरुले मञ्जुलाई फोन पनि गर्न नदिने गरेका थिए । ‘फोन गर्दा पनि सौता र श्रीमानसंगै हुन्थे उनीहरुले कुरा पनि गर्न दिन्थेनन् । फोन गरी भनेपनि कुरा नै गर्न दिन्थेनन् ।’
मञ्जुको सानो बच्चा पनि छ । पहिला पनि सौता र श्रीमानले आधारातमा घरवाट निकालेका थिए । उनी आधारातमा घरवाट निक्लेर छिमेकीको घरमा गएर बसेको बताए । उनले मञ्जुलाई घर छोडेर कतै नगएस् भनेर सम्झाएको बताइन् ।
‘मलाई जहिले पनि च क्कु देखाउँदै मा र्छु भन्छ आमा मलाइ यिनीहरुले मा र्छ न भन्थि’ तर यसरी ज्यान नै लिन्छ होला भन्ने सोच्न नसकेको बताइन् । उनले आफ्ना ४ भाई छोरालाई पनि मञ्जुलाई यस्तो अ त्या चा र भएको बारे जानकारी गराएको बताइन् । दाजुभाई मञ्जुको घरमा जाने तयारी गरेकै बेलामा चितवनमा यस्तो घ ट ना भएको उनले बताइन् ।
उनी श्रीमानका कारण आफ्नो ज्यान ख त रा मा छ भन्दै बारम्बार भन्ने गरेकी मञ्जुको त्यसैगरी ज्यान गयो । उनको दोस्रो विवाह पनि प रिब न्धमा परेर भएको बताएकी आमाले मञ्जुलाई एउटा बच्चा मात्र जन्माइदे तँलाई म बसिबसी पाल्छु भनेर फकाएर लगेको बताइन् । ति पुरुषले मञ्जुलाई श्रीमती बनाउन नभई बच्चा जन्माउनका लागि मात्र लिएर गएको छिमेकीले पनि बताएका छन् ।
उनीहरु बसेको कोठाको सँधै ढोका लाग्ने गरेका कारण छिमेकीले पनि वास्तविकता थाहा नपाएको बताए । प्रहरीले मञ्जुको श्रीमान र सौतालाई प्रहरीले नि य न्त्र णमा लिएको छ । मञ्जुको आमाले उनीहरुलाई कडा का र वा हीको माग गरेकी छन् ।
खुशीको खबर ! कोरोनाको औषधी नेपालमै बन्यो गर्ब गरौ ..अबदेखि यसरी काम हुँदै दुनियाँ चकित ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…